वडामा विकासका गतिविधिहरु अव तीव्र गतिमा | NewsMissile.com
वडामा विकासका गतिविधिहरु अव तीव्र गतिमा
Newsmissile December 20, 2017 विचार, समाचार0Comment
नेपालको सविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भै जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको ६ महिना भन्दा बढी भै सकेको छ। यस अविधिमा जनप्रतिनिधिहरुले जनताका कति अपेक्षाहरु पूरा गर्ने तर्फ उन्मुख भए, कति कार्य गरे यसको लेखाजोखा गर्ने कार्यको थालनी हुनुपर्दछ।
यसै सन्र्दभमा हामीले काठमाडौ जिल्लाको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष प्रेमलाल श्रेष्ठसंग आफनो ६ महिनाको अवधिमा वडामा के कस्ता विकास शुरु गर्नु भयो, घोषणापत्रका कामहरु के के हुदैछ ? जनताको अपेक्षाका लागि नगरपालिकामा तपाईको भूमिका कस्तो भै रहेको छ ? भन्ने विषयमा न्यूज मिसाइलका सम्पादक सानुराजा पुरीसंगको कुराकानी:
सात महिनाको अवधिमा तपाईले वडामा के काम गर्नु भयो ?
जनप्रतिनिधि भएपछि वडा कार्यालयमा जनताको कार्य गर्न थालेदेखि नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं ३ लाई पूर्वाधार सम्पन्न कसरी वनाउने। जनताका काम कसरी छिटो छरितो गर्ने भन्ने विषयमा मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । यस विचमा सीता बालविकास विद्यालयको भवन निर्माण पाँच धारा खाने पनीमा डिपवोरीङ्ग पम्प जडान, चिसापानी सडक, पाँचधारा सडक, तीनधारा नारायण लजडोल सडक, कपिटटोल लगायतका सडकमा विभिन्न स्थानमा ढलान गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी रातोमाटे सडक मर्मत सम्भार, फुटसल खेलको विकासका लागि खेलमैदानको तयारी, चिसापानी खेल मैदानको विकास, इचंगुनारायण मन्दिरबाट रत्नपार्कसम्म माइक्रो बस संचालन, इचंगुनारायण मन्दिर सतल निर्माण गरिएको छ भने सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई टोल सुधार समितिको सक्रियतामा झोला वितरण गरिएको छ ।
वडा कार्यालयको काम प्रभाकारी भएन प्रशासनिक काममा ढिलासुस्तीको गुनासोका बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
के कुरामा जनगुनासो आयो जनताको काम कसले रोकेको छ ? म वडा अध्यक्षलाई आएर सिधा भनि दिनु भयो भने काममा चुस्तता आउछ । मलाई लाग्छ हामीले श्रोत साधन र जनशक्तिले अधिकतम काम गरेका छौ । जनतालाई सेवा सुविधा दिने काममा कुनै कमि गरेका छैनौ ।
भूकम्प पिडितको गुनासो सुन्नु भएकै होला ? यस बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
भूकम्पको समयमा स्थानीय निकाय कर्मचारीबाट संचालन भएको थियो, त्यति वेला केहि कमि कमजोरी भएको थियो । जसले रातो कार्ड पाउनु पर्ने थियो तिनीहरुले पाएननन् नपाउनेले पाए कि भन्ेन व्यापक गुनासो आएपछि हामीले यस विषयमा गम्भीर भएर काम गरीरहेका छौ। गुनासो फारम भरि पठायौ हाम्रो वडामा करिब ८० जना पिडीत थपिए वहाँहरुलाई पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराएका छौ । राज्यको नीति र विधिले जग्गाको लालपूर्जा नभएका पिडितले घर बनाउदा समेत दोश्रो किस्ता रकम नपाउने अवस्था आयो यसमा वडा कार्यालय गम्भिर भएको छ र वहाँहरुलाई कसरी दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ हामी अध्ययन गरि रहेका छौ ।
घोषणा पत्र र जनतामा अथवा चुनावमा जाँदा गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु भएन भनि पटक पटक वडा कार्यलयमा डेलिगेसन आएकोमा के भन्नु हुन्छ ?
हो, यस वडामा साथीहरु डेलिगेशन आउनु भएको छ । काम गर्न प्रेरित गरी रहनु भएको छ । आपनो वडा विकासमा लाग्नु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। मलाई सधै झकझकाइ रहनु होला ।
करको विषयमा धेरै भयो भने आवाजका विषयमा के भन्नु हुन्छ ?
कर निर्धारण बैज्ञानीक र प्रगतिशिल अवधारणामा आधारित भएकोले त्यति धेरै हो जस्तो लाग्दैन । तर पनि कुनै केहिमा कर धेरै भएमा संशोधन गर्न सकिन्छ । यस तर्फ पनि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौ ।
घोषणा पत्र अनुसारको काम भएन भनिन्छ त ?
एमालेको स्थानीय कार्यकर्ताको हैसियतले हामीले निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको आधारमा नै काम गरि रहेका छौ । खानेपानी, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्र्वधनमा परम्परागत बस्तीहरुको संरक्षण, कृषि, पर्यटन जस्ता विषयमा हामीले काम शुरु गरि सकेका छौ ।
स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा कहाँ पुयो ?
यस तर्फ पनि कार्य गर्ने सोच बनाएका छौ ? यो नितान्त प्राविधिक विषय भएकोले हामीले प्राविधिकहरु संग कुराकानी गरिरहेका छौ । वहाँहरुको सल्लाह सुझव बमोजिम काम हुन्छ ।
Previous भ्रस्टाचार बिरुद्ध बिषयात्मक अन्तक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
Nextअग्नि पीडितलाई उदयपुर सेवा समाज कोरियाको सहयोग